Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kwama-Bitters - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-bitters agxilisa kakhulu ingxube yokudakwa okusetshenziselwa ukunambitheka kwe-cocktails nezinye iziphuzo ezidakayo.
Isizinda se-ultrasonic nokusikhipha kusiza ukudala iphrofayli enkulu ye-flavor ku-bitters.
Ngenkathi ukukhipha okwejwayelekile kwe-bitters kuyinkqubo echitha isikhathi, ukumnika kwe-ultrasonic kuyashesha futhi kuveza flavour ephakeme.
Ngokungafani ne-bitters ezidakayo ezifana ne-Amaro, ama-cocktail bitters abizwa njenge-bitters ezingenakuphuza. Lokhu kusho ukuthi ngokuvamile akalaywanga ukungeniswa, kodwa kunalokho asetshenziselwa imali encane njengesiko. Yenziwe kusuka ku-botanicals nomoya ophezulu, isetshenziswe ngokujwayelekile njengendlela yokugcoba i-cocktail, enezela emaconsi noma ekudakeni.
Isizinda se-Ultrasonic ukwandisa ukukhululwa kwama agent okugaya futhi isivinini sabo sokusabalalisa kakhulu.
Ezihlukahlukene ama-botanicals ezifana nezimpande, ama-bark, izinongo, amakhambi, nezithelo yizithako ezivame kakhulu ezitsheni. Ama-compounds aromatic, anika ama-bitters ukunambitheka kwawo okuyingqayizivele, akhishwa esakhiweni semifino (isib. Gentian, clove, ikhasi le-orange). Ama-bitters angenziwa kusuka kwisitshalo esisodwa sokuxubha noma njenge-tincture eyinkimbinkimbi kubandakanya i-botanicals ehlukahlukene.
I utshwala, evamile umoya onamandla, usebenza njenge-solvent, okubamba izinsimbi zokugcoba, izingxube. Imimoya evame ukusetshenziswa kakhulu yokulungiselela ama-bitters yi-vodka, i-rum, i-whiskey noma i-cognac. Njengomthetho ojwayelekile, i-vodka ne-gin isetshenziselwa ama-bitters ekhanya, kuyilapho i-whisky, i-rum ne-brandy isetshenziselwa ama-bitters anamandla. Ukuphuza utshwala obukhulu kakhulu kusiza ukugcina i-concoction yezithako futhi kunikeza impilo yokulala engenamkhawulo.
Ama-bitters agcwaliswa kakhulu nge-sugar encane eyengeziwe eyengeziwe noma isiraphu ukuze uthole ukunambitheka okuzungezile, okubushelelezi komkhiqizo wokugcina futhi kuhlanjululwe ngamanzi ku-flavor oyifunayo.
Isinyathelo-ngesinyathelo: Ultrasonic Ukulungiselela Bitters
Isinyathelo 1: Hlanganisa ama-botanicals omisiwe ngokugaya noma ukuwachoboza ube powder omuhle. Izindlela ezijwayelekile ze-maceration zihlanganisa udoti kanye ne-pestle, i-spice grinder, noma i-coffee grinder. Ngokwenza izinto ezinomile ezitshaliwe, i-surface yonke ye-botanical matter yanda. Ukwanda kwendawo yendawo kuvumela ukusebenzisana okuphakeme kwezitshalo kanye nokuphuza utshwala (i-solvent) ukuze izithako zendlala zingadluliselwa ngokuphelele emoyeni. Lokhu kuyisihluthulelo ukuthola ama-bitters ahle kakhulu.
Isinyathelo 2: Gweba umhlabathi owomile we-botanical nge-alcohol. Ngakho-ke, i-powder yezitshalo ifakwa ibe beaker ingilazi kanye nomoya (isb. Utshwala obuphezulu obufana ne-vodka, engenawo ukunambitheka okunamandla ekuqaleni). Ngama-100g wezinto zokutshala, sebenzisa cishe. U-600mL wezokwelapha eziphezulu.
Isinyathelo 3: Le ingxube ye-botanical alcohol isilungele ukuqhubeka. Ngokuba isizinda se-ultrasonic kanye nokwehliswa kwe-approx. 500mL kuya ku-1L, ama-ultrasonicators I-UP200Ht (200W) noma I-UP400St (400W) kuyindlela enhle yokwenza inqubo ephumelelayo yokushesha. Faka uphondo lwe-ultrasonic (sonotrode) ibe yi-beaker bese unikeza i-liquide cishe. 3-5 iminithi. Hambisa i-sonotrode ngokusebenzisa ingxube ukuze uzuze isisindo esifanayo kusuka kuzo zonke izinhlayiyana zezitshalo.
Isinyathelo 4: Ngemuva kwesinyathelo se-sonication, izingxenye ze-botanical zisuswe emoyeni othakazelisayo ngokuxuba ingxube ngokusebenzisa isihlungi esihle (isib. Ikhofi yekhofi, i-cheesecloth). Phinda ukwelashwa uma kunesidingo kuze kube yilapho zonke izinsila zisusiwe.
Isinyathelo 5 (ngokuzikhethela): Ukwakha i-bitters eziyinkimbinkimbi, ama-bitter ahlukahlukene ahlangana ndawonye. Izitshalo ezihlukahlukene ezibabayo ezivela ezintweni ezihlukahlukene zokwakheka zingakulungiswa ngesisekelo sezinyathelo ezingenhla. I-flavor ye-bitters enokuthakazelisayo itholakala ekuxubeni isib bitter orange i-orange kanye ne-cherry bitters. Optionally, engeza ushukela noma isiraphu ukunambitha bese uhlanza ngamanzi.
Isinyathelo 6: Okokugcina, ukumnika kugcwele ibhodlela elihlanzekile leglasi, ikakhulukazi amabhodlela okugcoba ingilazi eyenziwe ngeglasi elibomvu.
Amaprosesa ase-Hielscher ultrasonic anamandla futhi anokwethenjelwa, okwenza kube ithuluzi elihle lokukhipha emakhishini, imigoqo nemiboni. Ukuze kulungiswe kancane ama-bitters, sincoma ukusetshenziswa komunye we-compact yethu lab ultrasonicators. Ziyasebenza futhi zisebenziseka futhi zithandwa kakhulu ekulungiseleleni ama-bitters ezincane zabaphakathi.
Ngokukhiqizwa kokuhweba kwe-bitters, i-Hielscher inikeza ububanzi obubanzi industrial processors ultrasonic, engasetshenziselwa ukuhlanganiswa kwama-batch kanye nokumoya okuqhubekayo yokugeleza.
Thintana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinhlelo zethu ze-ultrasonic nokusetshenziswa kwazo ekukhiqizeni ama-bitters!
Ngokomlando, ama-bitters asetshenziswe njenge-tonic yokwelapha ukunciphisa ukudaya, ukulawula ukuthambekela nokwenza ngcono amandla. Ngaphandle kwezimpawu zabo zokwelapha, ama-ejenti abuhlungu avela kumakhambi anephunga elimnandi, izimpande, amagxolo, noma izithelo ezinhle zokufaka iziphuzo (isib. Utshwala) nokunambitheka kwazo okuyingqayizivele. Ama-botanicals asetshenziswa kakhulu anezakhi ezibabayo ziyimpande ye-gentian (Nationsana lutea L., eyaziwa nangokuthi i-Entian / Enzian), i-cinchona bark / i-quinine, i-Cascarilla, i-cassia, umhlonyane omanzi (i-Artemisia absinthium herba L.), i-orange peel, ne-cinchona bark.
Namuhla, izinhlobo ezimbili ze-bitters – i-bitters yokugaya ukudla kanye ne-bitter cocktail – ayatholakala futhi asetshenziselwa izinhloso ezahlukene:
I-bitters yokugaya izidakamizwa ziphuzo ezidakayo, ezingadliwa ngokucacile noma njengengxenye yokudla okudakayo. izinhlobo ezithandwayo ze-bitters zokugaya ukudla yiziphuzo zama-amaros nezamaJalimane ze-Kräuter, ezidla kakhulu njenge-digestif ngemuva kokudla. Ama-brand awaziwa yi-Averna, uCynar, uRamazzotti, uFernet Branca, uLucano, iMontenegro no-Unicum.
I-bitters ye-cocktail iyisithako esivamile se-cocktail esisetshenziselwa ukuvuna ukudla okupheka. Zibonakaliswe ukunambitheka okukhulu, okunamandla kangangokuthi ziboshelwe ngemali encane kakhulu (ukudonsa kuphela noma ukushayela okuhlakaniphile kwengeziwe ku-cocktails). Ezingxenyeni ze-cocktail, i-bitters iyisithako esinambithekisayo esiphundu, esinika ama-cocktail amaningi inothi labo eliyingqayizivele. Ama-cocktails, afaka ama-bitters njengento ebalulekile, njengeSazerac, iManhattan, Old Fashioned, Negroni.
I-bitters evamile eyenziwe ngesithako esisodwa sokuqhakazila yi-bitters lemon, ama-bitters ama-grapefruit, ama-bitter a-orange, ama-bitters e-mint, noma i-peach bitters. Ama-bitters anezinto eziyinkimbinkimbi aziwa ngokuthi ama-bitters anamakha (isib. Angostura, bitters Peychaud).
Ama-agent agqubuzelayo angatholakala ezinhlotsheni ezihlukahlukene zezitshalo ezifana nezimpande, umuthi wamagxolo, amaqabunga, izimbali, amapelisi noma ama-rhizomes.
Izibonelo zezimpande zokuxuba ziyizimpande ze-angelica, izimpande ze-barberry, izimpande ze-burdock, izimpande ze-calamus, izimpande ze-dandelion, izimpande ze-devil, izimpande ze-gentian, izimpande ze-licorice, i-Oregon yamagilebhisi impande, i-orris izimpande, izimpande ze-rhubarb, i-sarsaparilla impande yamagxolo.
Izibonelo zamagqabi okuqothula amaqabunga e-artichoke, amaqabunga omnyama omnyama, amaqabunga e-dandelion, amaqabunga e-horehound, amaqabunga ama-mugwort namafihlethi, amaqabunga e-wintergreen, amaqabunga emhlonyane.
Izibonelo zokuqhaqhazela i-cinchona bark, i-citrus peel, i-cherry bark, i-quassia bark.
Ukwakha i-bitters eziyinkimbinkimbi, ama-agent agcobile ne-flavouring ayengeziwe ukuze agcwalise ama-bitters. Lezi zitshalo ezivuthayo zivela emakhambi, izinongo, izimbali, izithelo, ama-barks, izimpande noma amantongomane.
Thola ezinye ze-botanicals ezinambitheka ezinambitheka ngezansi:
Izinongo: i-aniseed, i-artichoke, i-caraway, i-cardamom, i-cassia, i-celery imbewu, i-chili, isinamoni, i-clove, i-coriander, i-fennel, i-ginger, i-juniper amajikijolo, i-nutmeg, i-peppercorns, i-star anise.
Amakhambi & Izimbali: arugula, chamomile, daffodil, dandelion, elderflower, hibiscus, hops, lavender, ilamula lemon, i-lemongrass, i-menthol, i-mint, i-rhubarb, i-rose, i-rosemary, i-sage, i-thyme, i-yarrow.
Izithelo: ikhasi elimnandi noma elomisiwe lase-citrus elifana ne-lemon, i-lime, i-orange, i-grapefruit nezithelo ezomile njenge-apula, ama-cherry, amakhiwane, amagilebhisi, amapheya, omisiwe.
Nut: ama-alimondi, ama-pecans, ama-walnuts.
Ubhontshisi: ubhontshisi wekhokho, i-cocoa nibs, ubhontshisi wekhofi, i-vanilla ubhontshisi.